एमाले गुटले ‘कम्युनिस्ट पार्टी’ लेख्न पाउँछ ? – ABC KHABAR
प्रचण्ड सरकारले गणतान्त्रिक संविधान कार्यान्वयन गर्न स्थानीय तह निर्वाचन गर्यो । निर्वाचन परिणामको समीक्षा गर्दै नेकपा (माओवादी केन्द्र), केन्द्रीय सचिवालयको बैठक सम्पन्न भयो । प्रदेश इन्चार्ज र जिल्ला इन्चार्जहरू समेतको मौखिक प्रतिवेदनपछि विषयवस्तुको संश्लेषण गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले लिखित प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभयो, जसलाई बैठकले स्वीकृत गर्यो ।
पार्टी केन्द्रीय सचिवालयद्वारा स्वीकृत क। प्रचण्डको प्रतिवेदनमा भनिएको छ– “पार्टीले आफ्नो सर्वहारा वर्गीय चरित्र र पहिचान बचाउँदै … एमालेभित्रको उच्च जातीय अन्धराष्ट्रवादी र परिवर्तनविरोधी संशोधनवादी धारालाई मलजल गरेर प्रतिगमनतिर लैजाने षड्यन्त्रमा सामन्ती शक्ति र वैदेशिक प्रतिक्रियावादी शक्तिहरू लागिरहेका छन् । हामीले एमालेभित्रको … त्यसप्रकारको प्रतिगामी चिन्तन प्रवृत्तिको खण्डन, आलोचना र भण्डाफोर गर्दै त्यहाँभित्रको सच्चा देशभक्त र परिवर्तनपक्षीय प्रवृत्तिलाई बलियो पार्न जोड गर्नुपर्दछ ।” पार्टीको यही निर्णय निर्देशनअनुसार संशोधनवादी र अवसरवादी एमाले गुटको भण्डाफोर गर्न यो आलेख केन्द्रित छ ।
विश्व क्रान्तिमा माक्र्सवादी विज्ञानको स्थान
२१औं शताब्दीको माक्र्सवादलाई एकीकृत शृङ्खलाको रूपमा माक्र्सवाद–लेनिनवाद–माओवाद भनिन्छ । संक्षिप्तमा ‘माक्र्सवाद’ भन्न सकिन्छ । यो नै मानव मुक्तिको सर्वोच्चतम् विज्ञान हो । माक्र्सवादी विज्ञानको अभावमा साम्राज्यवादमा पतन भएको एकाधिकार पुँजीवादले निश्चय नै मानव सृष्टि ध्वंश गरिसक्ने थियो । द्वन्द्वात्मक भौतिकवादी विश्वदृष्टिकोणमा एकाधिकार पुँजीवादविरुद्ध सर्वहारा क्रान्तिको माक्र्सवादी दर्शनले मात्र पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धलाई ठेगान लगाएर सर्वहारा क्रान्ति अभ्यास गर्यो । जसले मात्र मानव सृष्टिको रक्षा गरेको छ ।
युरोप, खासगरी जर्मनीको दर्शन, बेलायती अर्थशास्त्र र फ्रान्सेली वर्गसङ्घर्षको संश्लेषण नै माक्र्सवाद हो । तसर्थ दर्शनशास्त्र, राजनीतिक अर्थशास्त्र र वैज्ञानिक समाजवाद, जसको विकास फ्रान्समा पेरिस कम्युनको रूपमा भयो, लाई माक्र्सवादको सङ्घटक अङ्ग मानिन्छ । फ्रेडरिक एङ्गेल्सको महान सहयोगमा कार्ल माक्र्सले यो अत्याधुनिक विज्ञानको विकास गर्नुभयो । वैज्ञानिक समाजवादको प्रश्नमा सर्वहारा श्रमिकवर्ग नै मानव इतिहासको अन्तिम उत्पीडितवर्ग रहेको र उनीहरूले राज्यसत्ता कब्जा गरेर त्यसको विलोपको निम्ति वर्गसङ्घर्ष लड्ने क्रान्तिकारी सिद्धान्त दिनुभयो ।
माक्र्सको निधनपछि फ्रेडरिक एङ्गेल्सको नेतृत्वमा कार्ल माक्र्सका वैज्ञानिक योगदानहरूलाई ‘माक्र्सवाद’ नाममा संष्लेषण गरियो । सर्वहारा वर्गले राज्यसत्ता लिने माक्र्सवादी विज्ञानको व्यावहारिक प्रयोग भने रुसमा अक्टोबर क्रान्तिद्वारा लेनिनले गर्नुभयो । किनभने, अनुभवको कमीका कारण फ्रान्सका मजदुरहरूले कब्जा गरेको ७२ दिनपछि पेरिस कम्युन गुमाउनु पर्यो । माक्र्सवादको व्यावहारिक प्रयोगको सिलसिलामा विकसित लेनिनका योगदानहरूलाई ‘माक्र्सवाद–लेनिनवाद’ भनियो । तत्कालीन परिस्थितिमा तेस्रो विश्व, जहाँ अर्ध–औपनिवेशिक तथा अर्ध–सामन्ती अवस्था थियो, चीनमा माओ त्सेतुङले सर्वहारावर्गको नेतृत्वमा पुँजीवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्नुभयो । ‘अन्तर्विरोधबारे’ र ‘व्यवहारबारे’ जस्ता रचनाहरूको आधारमा माओले माक्र्सवाद–लेनिनवादमा दार्शनिक योगदान गर्नुभयो । सँगसँगै आफ्नै नेतृत्वमा माओले निरन्तर क्रान्तिको सिद्धान्तका रूपमा ‘महान सर्वहारा सांस्कृतिक क्रान्ति’को अभ्यास गर्नुभयो । जसले, माओका योगदानहरूलाई माक्र्सवादको तेस्रो कडीका रूपमा स्थापित गरेको छ । यसरी माक्र्सवादको शृङ्खलाबद्ध विकास ‘माक्र्सवाद–लेनिनवाद–माओवाद’को तहमा पुगेको छ । अतः प्रस्ट छ कि साम्राज्यवाद र सर्वहारा क्रान्तिको युग अन्त्य नभएसम्म माक्र्सवाद–लेनिनवाद अख्तियार गर्नेहरू र सर्वहारा सांस्कृतिक क्रान्तिलाई प्रस्थानविन्दु मान्ने माक्र्सवादी–लेनिनवादी–माओवादीहरू मात्र विद्यमान शताब्दीका सच्चा माक्र्सवादीहरू हुन् ।
माक्र्सवाद–लेनिनवाद– माओवादलाई क्रान्तिकारी विज्ञानका रूपमा बुझ्न यसका मुख्यतः पाँच आधारभूत सिद्धान्तहरू स्वीकार गर्नुुपर्दछ । त्यो १) वर्गसङ्घर्ष अर्थात् बल प्रयोगको सिद्धान्त, २) सर्वहारावर्गको अधिनायकत्वको सिद्धात, ३) सर्वहारा अन्तर्राष्ट्रवादको सिद्धान्त, ४) जनवादी केन्द्रीयताको सिद्धात र ५) निरन्तर क्रान्तिको सिद्धान्त हो । पहिलो, दोस्रो र तेस्रो सिद्धान्तको विकास माक्र्स–एङ्गेल्सले गर्नुभएको हो भने चौथो लेनिनले र पाँचौँ सिद्धान्त माओले विकास गर्नुभएको हो । अतः को माक्र्सवादी कम्युनिस्ट हो र को होइन ? भन्ने तथ्यको कसी यही आधारभूत सिद्धान्तले निर्धारण गर्छ ।
माक्र्सवादका पाँच आधारभूत सिद्धान्त औपचारिक रूपमा स्वीकार गर्दै त्यसको व्यावहारिक अभ्यासमा डट्नेहरू सच्चा माक्र्सवादी हुन् । पाँचमध्ये कुनै एक मात्र सिद्धान्त छोड्नेहरू र पाँच आधारभूत सिद्धान्तलाई व्यावहारिक अभ्यास नगर्नेहरू संशोधनवादी हुन् । अब भन्नुस्, एमाले गुट कुन ‘वादी’ हो ? जवाफ प्रस्ट छ कि ‘कम्युनिस्ट पार्र्टी’ लेख्ने एमाले गुटले प्रस्तुत पाँच आधारभूत सिद्धान्तलाई व्यावहारिक अभ्यासमा प्रयोग गरेको
छ ? किमार्थ छैन । त्यसैले स्वतः प्रमाणित गर्छ कि एमाले गुट माक्र्सवादी नभएर पुँजीवादी प्रतिक्रियावादमा पतन भएको घृणित संशोधनवादी गुट हो
राज्यसत्तामा पुगेर त्यस राज्यसत्तालाई सर्वहारा क्रान्तिविरुद्ध दुरूपयोग गर्ने अपराधमा एमाले गुटको हजुरबा निकिता ख्रुस्चेभ हुन् । यद्यपि, जोसेफ स्टालिनका पनि अधिभूतवादी कमजोरीहरू थिए । सन् १९१७ को अक्टोवरमा स्थापित सोभियत सङ्घको जम्माजम्मी ६ वर्ष मात्र लेनिनले नेतृत्व दिन पाउनुभयो । यसको अर्थ ख्रुस्चेभजस्ता संशोधनवादीलाई कुनै छुट हुनुपर्छ भन्ने हुँदैन । दोस्रो विश्वयुद्धपछि स्टालिनको निधनसँगै सत्ता हत्याउन पुगेका ख्रुस्चेभको प्रतिक्रान्तिको कारण अन्ततः सोभियत सङ्घ नै विघटन हुन पुग्यो । विश्व सर्वहारावर्गलाई त्योभन्दा ठूलो अरू क्षति के हुन सक्छ ? जुन संशोधनवादी प्रतिक्रान्तिको खलनायक ख्रुस्चेभ बने । नेपालमा एमाले त्यही ख्रुस्चेभ चरित्रमा पतन हुन पुगेको तथ्यलाई नजरअन्दाज गर्नु माक्र्सवाद हुन सक्दैन ।
नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन र क। पुष्पलाल श्रेष्ठ
सन् १९४९ मा क। पुष्पलालको नेतृत्वमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना भयो । जसले तत्कालीन चीनसरह अर्ध–औपनिवेशिक र अर्ध–सामन्ती मूलुक नेपालमा नयाँ जनवादी क्रान्तिको कार्यदिशा लियो । पार्टी स्थापनाको दुई वर्षमै कुनै बिना ठोस कारण मनमोहन अधिकारी तथा पछि पञ्चभलाद्मी बन्न पुगेका डीपी अधिकारीहरूले पुष्पलाल श्रेष्ठलाई महासचिव पदबाट गलहत्याए । पूर्वमन्त्री अशोककुमार राईअनुसार राजावादी पञ्च भइसकेपछि डीपी अधिकारीले एक अन्तर्वार्तामा बोले, ‘पढे लेखेका बाहुनहरू भटाभट केन्द्रीय समितिमा आयौँ र दश कक्षा मात्र पढेको पुष्पलाललाई महासचिवबाट गलहत्याइदियौँ ।’
यसरी चरम जातिवादी संशोधनवादी मनमोहन अधिकारीको अगुवाइमा पुष्पलाल श्रेष्ठलाई गलहत्याइयो । परन्तु, आजीवन रूपमा क। पुष्पलाल नयाँ जनवादी क्रान्तिको पक्षमा दृढ रहे । मोहनविक्रम सिंहद्वारा लिखित ‘गद्दार पुष्पलाल’ पुस्तिकाबाट जुन भ्रम फैल्याइयो, त्यो वस्तुतः मनमोहन अधिकारीकै उग्र जातिवादी लाइन थियो । त्यसको खण्डन गर्दै जनयुद्धकालीन नेकपा ९माओवादी० ले ‘इमानदार पुष्पलाल’ भनेर सम्मानित गर्यो ।
संवत् २०१९ मा आइपुगेर तिनै जातिवादी संशोधनवादीहरूले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सर्वोच्च पदमा केशरजङ्ग रायमाझीलाई पुर्याउने काण्ड रचे । रायमाझीले सामन्ती राजा महेन्द्रको पाउमा नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन र आफू समेतलाई सभक्ति समर्पण गरे । तिनै खलनायक केशरजङ्ग रायमाझी एमाले गुटका पिता हुन् ।
एमाले गुटको उत्थान र पतन
फासीवादी हिटलरलाई परास्त गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनमा स्टालिन सोभियत सङ्घको नेतृत्व गर्दै हुनुहुन्थ्यो । त्यही समय सन् १९४९ मा चिनियाँ जनक्रान्ति सम्पन्न भयो । ख्रुस्चेभको संशोधनवादविरुद्ध चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष माओले महान बहस गर्नुभयो । त्यसको व्यावहारिक अभ्यास १९६६–७६ बीच दश वर्षमा सर्वहारा सांस्कृतिक क्रान्तिका रूपमा गरियो । त्यसबाट भारतीय क्रान्तिकारीहरूमा निकै ठूलो प्रभाव पर्यो । बङ्गालका क। चारु मजुम्दार नेतृत्वमा भारतमा भीषण सशस्त्र किसान क्रान्ति सुरु भयो । भारतका अनेक संशोधनवादी तत्वहरूविरुद्ध लाल विद्रोह गर्दै चारु मजुम्दारले ‘भाकपा ९माले०’ गठन गरी क्रान्तिलाई अघि बढाए । त्यही भाकपा ९माले० को प्रभावबाट पहिला कोअर्डिनेसन केन्द्र नाम रहेको ‘नेकपा माले’ बन्न पुग्यो । तत्कालीन परिस्थितिमा एमालेको उत्थान यसरी चारु मजुम्दारको प्रभावबाट भयो ।
सीपी मैनाली नेतृत्वमा तत्कालीन माले समूह चारु मजुम्दारको पूरै यान्त्रिक नक्कल गर्न पुगेको तथ्य त्यसको तत्कालीन कार्यनीतिले प्रष्ट गर्छ । भारतीय क्रान्तिमा चारु मजुम्दारले ‘माले’ भने, नेपालमा सीपी मैनालीले पनि ‘माले’ नै । चारु मजुम्दारले नयाँ जनवादी क्रान्ति भने, सीपी मैनालीले पनि त्यही । चारु मजुम्दारले आफ्नो फौजी कार्यनीतिलाई ‘वान मेन, वान स्क्वायड, वान एरिया, वान एक्सन’ भनेका थिए, नेपालमा सीपी मैनालीको माले समूहले पनि त्यही कार्यनीति भन्यो । अतः यसरी तत्कालीन माले समूहले नेपाली विशिष्टतामा नयाँ जनवादी क्रान्ति गर्ने पुष्पलाल श्रेष्ठको सही माक्र्सवादी जोडका विरुद्ध चारु मजुम्दारको अन्ध नक्कल गरे । नक्कल क्षणिक नै हुन्छ, परिणाममा चारु मजुम्दारको अवसानसँगै तत्कालीन माले समूहको नक्कल पनि समाप्त हुन गयो ।
त्यसपछि माले समूहमा हाहाकार पैदा भयो । वस्तुतः निम्न पुँजीवादी रोमान्सको रूपमा उत्थान भएको माले समूहको एक हिस्सा नारायणहिटी दरबारमा साँठगाँठ गर्न पुग्यो । नेपाली काङ्ग्रेसविरुद्ध दरबारले मालेको त्यो हिस्सालाई ढाप माथ्र्यो । वैचारिक राजनीतिक रूपले त्यही भागदौडको क्रममा माले समूहले व्यवहारतः नयाँ जनवादी क्रान्ति त्याग्यो । उता चारु मजुम्दारको नयाँ जनवादी क्रान्तिको चिहान खन्दै संशोधनवादी ज्योति बशु पश्चिम बङ्गाल सरकारको नेतृत्वमा पुगे । पहिला चारु मजुम्दारको अन्धनक्कल गरेका सीपी मैनालीहरू मजुम्दारको हत्यापछि संशोधनवादी ज्योति बशुको दुरुस्तै अन्धनक्कलमा परिणत भए । त्यसरी प्रकारान्तरले माले समूह एमाले हुँदै कम्युनिस्ट पार्टीको खोल ओढेर ज्योति बशुको सक्कली सन्तान बन्न पुगेको छ । अतः एमाले गुटको अर्को संशोधनवादी पिता ज्योति वशु हुन् ।
आश्चर्य, एमालेका रायमाझी र बशु दुई पिता हुन पुगेका छन् । यो वस्तुतः अप्राकृतिक हो र त्यसैकारण एमाले गुटलाई लिंग पहिचान नभएको गुट पनि भन्ने गरिन्छ ।
एमाले गुटको प्रतिक्रियावादीकरण शृङ्खला
१। एकातिर पुष्पलाल श्रेष्ठको नेतृत्वविरुद्ध चरम जातिवादी मनमोहन अधिकारी प्रवृत्तिको निरन्तरता र निम्न पुँजीवादी रोमान्सका कारण वर्गदुस्मन सफाया अभियान चलाएर सामन्तहरूको टाउको गिँड्न पुगेका माले समूह त्यसरी भागदौडमा पुग्नु स्वभाविक थियो । जसले सर्वहारा दृष्टिकोण र व्यावहारिक दृष्टिले माले समूह गठनसँगसँगै वर्गसङ्घर्ष परित्याग गर्यो । माले समूहको चौथो महाधिवेशनले माओ विचारधार परित्याग गर्यो । त्यो केवल औपचारिकता थियो ।
२। गणेशमान सिंहले आँट नगरेको भए त्यसरी संशोधनवादमा पतीत माले समूह ‘जनपक्षीय उम्मेद्वार’को झ्यालबाट पञ्चभलाद्मी भई नै सकेको हो । धन्न, काङ्ग्रेसका गणेशमान सिंहले आँट गरे र पुष्पलाल श्रेष्ठको संयुक्तमोर्चाको बिचार स्वीकार गर्दै सन् १९९० मा संयुक्त जनआन्दोलनको नेतृत्व दिए । परिणाममा पञ्चको दानापानीमा डुबिसकेको माले समूह कुवाको भ्यागुता माटोको डल्लामाथि उफ्रेर गजक्क परेझैँ संसदीय ढोकामा छिर्यो ।
३। माक्र्सवादी आधारभूत सिद्धान्तको कसीमा राख्दा मदन भण्डारी कम्युनिस्ट थिएनन् । परन्तु, उनी एकजना जुझारु जनवादी अवश्य थिए । त्यसैले उनको दासढुङ्गामा हत्या भएको मानिन्छ । तर, पटक–पटक सत्ता नेतृत्वमा पुगेर पनि एमाले गुटले मदन भण्डारीको हत्यारा खोज्ने जाँगर देखाउँदैन । अझ विद्या भण्डारी नै राष्ट्रपति हुँदा पनि दासढुङ्गा हत्याकाण्डको छानविनप्रति बेवास्ता शङ्कास्पद ठहर्छ । टीएन प्रधानको नामबाट मदन–आश्रित हत्या योजनाबारे जनादेश साप्ताहिकमा सीपी मैनालीले खुलाएका तथ्यहरू अन्ततः प्रमाणित हुँदैछन् । जसअनुसार दासढुङ्गा हत्याको योजनाकार तथा सञ्चालक खड्ग ओली र माधव नेपाल हुन् ।
४। संसदीय राजनीतिमा आउने अवसर जुटेपछि एमाले गुटले बल्खुमा कार्यालय खडा गर्यो । एमाले नेताहरूको अनेक अनुनय विनयपछि अमेरिकी राजदूत बल्खुमा सवारी हुने भए । साम्राज्यवादी अमेरिकाको राजदूतले नदेखोस् भनेर बल्खु कार्यालयमा झुन्ड्याइएको माक्र्स–लेनिनको फोटो हटाउने निरीह दलालीपन एमाले गुटले प्रदर्शन गर्यो । त्यसबापत अमेरिकालगायतले एमाले गुटलाई अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको राम्रै उपहार दियो ।
५। खासगरी, खड्ग ओलीकै जोडमा एमाले गुटले महाकाली सम्झौता गर्यो । जो राष्ट्रघात थियो भन्ने तथ्य बामदेव गौतमहरूले खड्ग ओली गुटलाई राष्ट्रघाती करार गर्दै एमाले विभाजन गरेबाट प्रमाणित हुन्छ । परन्तु, बामदेवको राष्ट्रवाद अन्ततः खड्ग ओलीकै पाउमा लम्पसार पर्यो ।
६। वीरेन्द्रको वंश विनाश गर्ने हत्यारा ज्ञानेन्द्र शाहको पाउमा एमाले गुटको महासचिव माधव नेपालले सभक्ति दाम चढाए । त्यस्तै कुनै एक कार्यक्रममा कुर्सीमा बसेको ज्ञानेन्द्र शाहको पाउमा रिक्रुटझैं पुसअप गरेको ढाँचामा खड्ग ओली लम्पसार परेको निरिह तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा छ्यासछ्यास्ती पाइन्छ ।
७। गोरुगाडामा चढेर अमेरिका पुगिँदैन भन्दै गणतन्त्रवादी आन्दोलनको विरोध गर्ने खड्ग ओली प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा पुगेर ‘हावाहुरी आएर मात्र स्वीकार गर्नुपरेको बाध्यता’ मा सङ्घीयता र समानुपातिक समावेशीकरणप्रति शत्रुता बोलिरहेका छन् ।
८। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको संस्थापक महासचिव पुष्पलाल श्रेष्ठको जीवनसंगिनी तथा वाम नेता साहना प्रधानलाई गणतन्त्र नेपालको प्रथम राष्ट्रपति बनाउन नेकपा ९माओवादी० ले जोड गर्यो । तर, एमाले गुटले साहना प्रधानलाई इतिहासको त्यो सम्मान दिन निर्ममतापूर्वक रोक्यो ।
९। खड्ग ओली नेतृत्वको एमाले गुट थारुवान–मधेसविरोधी हो, भनेर यहाँ लेखिरहनु पर्दैन । आदिवासी जनाजाति, दलित, मुस्लिम तथा मधेसीलाई एमाले गुट ‘जङ्गली स्वाँठ’ नै देख्छ । जसले दिगो शान्ति र राष्ट्रिय एकतामा आघात पुर्याइरहेको छ । एमाले गुटबाट केही जनजाति, मधेसी, दलित मूलका व्यक्तिहरू उपल्लो निकायमा पुर्याइएको नाटक गरिन्छ । वस्तुतः त्यो सामन्ती राजतन्त्रले हिरालाल विश्वकर्मालाई मन्त्री बनाएर सबै दलितहरूको मुक्तिको धमास पिटेबाहेक सामुदायिक प्रगतिमा त्यो बाधक मात्र हुन गएको छ ।
जब कि महान जनयुद्धको धक्काले नेपालका जुनसुकै उत्पीडित जातिलाई मुक्ति र प्रगति खातिर व्यक्ति नभएर समग्र समुदायलाई उठाउनुपर्ने ऐतिहासिक चेतनाबोध गराएको छ ।
१०। संविधान निर्माण खातिर माओवादीले १६ बुँदे सहमति गर्यो । त्यससँगै जोडिएको खड्ग ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने भद्र सहमतिमा माओवादीले इमानदारीता प्रदर्शन गर्यो । साथसाथै, संविधान घोषणासभामा क। प्रचण्डले ‘असल छिमेकी बन्न थतयार छौँ, तर हामी कसैको यसम्यान बन्न तयार छैनौँ’ भनेर राष्ट्रिय स्वाभिमान अभिव्यक्त गर्नुभयो । के माओवादीको समर्थन नभए खड्ग ओली सिंहदरबारमा फोटो टाँस्न सफल हुन्थे ? तर, घातक र कृतघ्न एमाले गुटले कथित राष्ट्रियता नामको जस आफ्नो झोलीमा हाल्यो ।
११। प्रथम स्थानीय तह निर्वाचनमा देखाएको हर्कतले एमाले गुटमा ‘कम्युनिस्ट’ त के, न्यूनतम वाम चरित्रसमेत नरहेको प्रमाणित गर्दछ । अचेत मतदातालाई मात्र होइन, एमाले गुटले कर्मचारीलाई समेत खरिदबिक्री गरेको तथ्यहरू छन् । जसरी पनि जित्ने चरित्रलाई कसले वामपन्थी मान्छ ?
१२। स्थानीय तह निर्वाचन परिणाम अनुकूल नै सङ्घीय संसदमा बहुमत ल्याए एमाले गुटले हत्यारा ज्ञानेन्द्र शाहलाई राष्ट्रपति बनाउँदै जनयुद्ध र जनआन्दोलनका सम्पूर्ण उपलब्धिहरू खतम पार्ने षडयन्त्रकारी योजना गरेको छ । राष्ट्रपति विद्या भण्डारीको माध्यमले एमाले त्यस्तो प्रतिक्रान्तिको आधार खडा गरिरहेको छ ।
सङ्घीय गणतन्त्र समाप्त पार्ने प्रतिक्रान्तिसँगै एमाले गुट महान जनयुद्धलाई अपराधीकरण गर्न र जनयुद्ध लडेका माओवादी नेताहरूलाई झुण्ड्याउन बाह्य र आन्तरिक प्रतिकृयावादी शक्तिको तागत सङ्कलन गरिरहेको छ ।
प्रस्तुत प्रतिक्रियावादी विचार र चरित्रका कारण एमाले गुट स्वतः सिद्ध नेपाली जनताको शत्रु कित्तामा पतन भएको प्रमाणित गर्छ । नेपाली समाजमा वामपन्थीको अर्थ यथास्थितिविरुद्ध विद्रोह बोल्नु, आधारभूत तहका जनताको राज्यसत्ता निर्माण गर्नु र प्रगतिशील दिशामा अघि बढ्नु हो । यीमध्ये एमाले गुटमा लेस चरित्र बाँकी नरहेको हुँदा त्यसलाई वामपन्थी ठान्ने भूल माक्र्सवादीले गर्नु हुँदैन । बरु चरम प्रतिक्रियावादी चरित्रमा पतन भएको एमाले गुटको पहाडिया अन्धराष्ट्रवादको नारालाई अध्यक्ष क। प्रचण्डले ‘अन्ततः हिटलरको राष्ट्रवाद’सँग तुलना गर्नुभएको छ । यो एकदम सही हो ।
एमाले गुटले कसरी लेख्न पाउँछ कम्युनिस्ट पार्टी ?
माक्र्सवादका पाँच आधारभूत सिद्धान्तको कसीमा भन्नुपर्छ, खड्ग ओली नेतृत्वको एमाले गुटले कम्युनिस्ट पार्टी किमार्थ लेख्न पाउँदैन । त्यसले माक्र्सवाद–लेनिनवाद भन्न पाउँदैन र विश्व कम्युनिस्ट पार्टीको झण्डा हसिया–हथौडा बोक्न पाउँदैन । यदि कम्युनिस्ट पार्टी लेख्न चाहन्छ भने माक्र्सवाद–लेनिनवाद भन्न चाहन्छ भने र हसिया–हथौडाको झण्डा बोक्न चाहन्छ भने एमाले गुटले माक्र्सवादका आधारभूत सिद्धान्तहरू व्यावहारिक अभ्यास गर्न सक्नुपर्छ । के त्यो सम्भव छ ? साम्राज्यवाद र घरेलु प्रतिक्रियावादको चुत्थो नोकर बनिसकेको एमाले गुटबाट त्यो अपेक्षा गर्नु मात्र पनि संशोधनवादी रुझान हुन जान्छ ।
जसरी निकिता ख्रुस्चेभको संशोधनवादले सोभियत सङ्घलाई चिहानमा पुर्यायो, देङ स्याओ पिङले महान सर्वहारा सांस्कृतिक क्रान्तिको घाँटी निमोठे र जसरी पश्चिम बङ्गालका संशोधनवादी ज्योति बशुले चारु मजुम्दार नेतृत्वको चिहान खने, ठीक त्यसरी नै प्रतिक्रियावादमा पतीत संशोधनवादी र चरम अवसरवादी एमाले गुटले नेपाली माओवादी आन्दोलनको चिहान खन्दै छ । संशोधनवाद वस्तुतः पुँजीवादी प्रतिक्रियावाद हो । त्यसैले क्रान्तिकारी माक्र्सवादको चिहान खन्नु त्यसको जन्मजात चरित्र हुन्छ । तब प्रश्न छ, के माओवादी साथीहरू चिहानमा गाडिन तयार हुने ?
प्रस्तुत शृङ्खलाबद्ध दलाल तथा नोकरशाही पुँजीवादमा पतन भएको एमाले गुटले स्थानीय तह निर्वाचनमा चरम प्रतिक्रियावादी हर्कत गरेर आफूलाई जसरी प्रथम स्थानमा पुर्यायो । यो भनेको माओवादी आन्दोलनको चिहान खन्न प्रतिक्रियावादी एमाले सफल भएको हो । स्थानीय तह निर्वाचन परिणामका आधारमा माओवादी आन्दोलनलाई गाड्ने चिहानको ठूलो खाल्डो एमाले गुटले त्यसरी खनेको छ । अब माओवादी साथीहरूलाई प्रश्न छ, के लासझैँ घिसारिएर त्यो प्रतिक्रान्तिकारी चिहानमा गाडिन माओवादी क्रान्तिकारीहरू तयार छन् ? माओवादी केन्द्र सचिवालय बैठकको निष्कर्ष हो, माओवादीहरू सम्पूर्ण रूपले प्रतिरोध सङ्घर्ष गर्नेछन्, तर एमाले गुटले खनेको चिहानमा पुरिन तयार छैनन् ।
वर्गसङ्घर्षको नियम हो कि क्रान्तिले प्रतिक्रान्ति जन्माउँछ । प्रतिक्रान्तिमाथि विजय प्राप्त गरेर मात्र सर्वहारा क्रान्ति सम्भव हुन्छ । साथसाथै, जसरी संशोधनवादीले क्रान्तिकारीको चिहान खन्छ, ठीक त्यसरी नै माओवादी क्रान्तिकारीले संशोधनवादी गुटको चिहान खन्न र त्यसलाई गाड्न सक्नुपर्छ । नेपाली राजनीतिमा काङ्ग्रेस माओवादी आन्दोलनको रणनीतिक दुस्मन हो भने एमाले गुट कार्यनीतिक दुस्मन हो । त्यसैले काङ्ग्रेसविरुद्ध माओवादीको अन्तिममा मात्र घमासान पर्छ भने त्यसअघि नै एमालेविरुद्ध माओवादीले घमासान लड्न र त्यसलाई माटोमा मिलाउन सक्नुपर्छ । त्यसरी मात्र यहाँ सर्वहारा क्रान्ति सुनिश्चित हुन्छ ।
निष्कर्षमा, अब एमाले गुटले कम्युनिस्ट पार्टी लेख्न पाउँदैन । माक्र्सवाद–लेनिनवाद भन्न पाउँदैन र हसिया–हथौडाको झण्डा बोक्न पाउँदैन । तर, माओवादी केन्द्रको यो सकारात्मक आग्रहलाई नजरअन्दाज गरेर प्रतिक्रियावादी चरित्रमा कम्युनिस्ट पार्टीको बदनाम गर्छ भने एमाले गुटविरुद्ध क्रान्तिकारी जनसमुदाय भौतिक आक्रमणमा उत्रने छन् । त्यसबाट उत्पन्न परिणामको जिम्मेवार संशोधनवादी र अवसरवादी एमाले गुट नै हुनेछ ।
अतः जसरी त्यसको हजुरबा निकिता ख्रुस्चेभ, पिताद्वय केशरजङ्ग रायमाझी र ज्योति बशुको पतन भयो, एमाले गुटको राजनीतिक पतन त्योभन्दा खराब हुनेछ । खाँचो माओवादीको सर्वहाराकरणमा जोड तथा संशोधनवाद र अवसरवादको निर्णायक भण्डाफोरको मात्र हो ।
Tagged Gopal Kirati (गोपाल किराती)
५७ वर्षिया महिलालाई सामुहिक बलत्कार